"Marina ny naminanian’Isaia anareo mpihatsaravelatsihy, araka ny voasoratra hoe: Ity firenena ity manaja Ahy amin’ny molony, fa ny fony kosa lavitra Ahy. Koa foana ny ivavahan’ireo amiko." Marka 7:6, 7
"Izay mandeha tsy misy tsiny no mandeha matoky. " Ohabolana 10:9
Amin’ny asa fanamboarana fanaka dia misy fomba fametahana, eo ambonin’ny hazo tsotra, takelaka manify nalaina tamina hazo sarobidy kokoa, toy ny voamboana na acajou, ohatra. Ny fanaka namboarina tamina hazo fisaka voarakotra toy izany dia tahaka ny hoe vita manontolo tamina hazo sarobidy. Fa tandremo tsy hovankonina na kikisana; ho hitanao avy hatrany eo ilay hazo tsy sarobidy ao anatiny!
Ny fivavahana kristiana iainantsika ve, tsy mety ho “fitiavam-bavaka ankosotra” fotsiny ihany? Raha jerena etỳ ivelany dia maha te hidera ny fitondrantenantsika; mamonjy fotoam-pivavahana, manao fanomezana amin’ny asa fanasoavana… Kanefa izany rehetra izany dia mety ho ivelambelany ihany.
Ny fitsapana eo amin’ny fiainana no indraindray manao ny asan’ny fikikisana na ny vankona. Raha sendra mitranga ny zava-tsarotra tokony hisehoan’ny finoana, ny fitiavana, ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, ny faharetana, dia indro fa manjavona ilay ankosotra ara-pivavahana, raha tsy tena miaina ny maha kristiana isika! Tsy eo, na misy fotoana tsy ahatsapana intsony ny fisiany, ireo fototr’ilay aina omen’Andriamanitra, ireo fifandraisana marina aminy amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, loharanon’izany aina izany. Ilay tena toetra maha olona no mipoitra.
Anisan’ny fiainam-piarahamonina ny fivavahana: ho an’ny maro io dia mariky ny fananan-kaja. Fa mba ahoana kosa ny fihevitr’Andriamanitra momba izany fitiavam-bavaka ankosotra izany? Afaka ny hianina amin’izany ve Izy? Sanatria dia sanatria! “Fahamarinana ao am-po” no ankasitrahiny (Salamo 51:6). Koa dia izany no itsapana ny fahatoniana sy ny fatokiana an’Andriamanitra.